Ny satroka tsara indrindra ho an'ny alika amin'ny ririnina sy ny fahavaratra | Dogs World
Ny satroka alika tsara indrindra amin'ny ririnina sy ny fahavaratra
Nat Cherry | 08/11/2021 12:35 | Fitaovana alika
Ny satroka alika dia fitaovana tena ilaina amin'ny volana mafana indrindra amin'ny taona sy amin'ny ririnina mafy indrindra, ary tsy vitan'ny hoe miaro ny lohan'ny biby fiompintsika, fa koa satria mahafinaritra izy ireo miaraka amin'ny iray!
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia tsy hiresaka momba ny satroka alika ihany isika momba ny asany ary toro-hevitra vitsivitsy tena ilaina amin'ny fomba hifidianana azy ireo, ho hitantsika ihany koa ny vokatra vitsivitsy izay mahafatifaty. Manoro hevitra anao koa izahay hamaky ity lahatsoratra hafa momba ny akanjo ho an`ny alika kely: akanjo mafana sy jumper Mba hiaraka ny alikanao!
Cap ho an'ny biby fiompy,...
NETUME Beanie Set ...
Ushang Pet Hat Set...
Kuoser - Satroka sy...
Satroka Carolilly Knitted...
1 Ny satroka tsara indrindra ho an'ny alika
1.1 Satroka visor ho an'ny alikanao sy ho anao
1.2 Satroka fitsingerenan'ny andro nahaterahana ho an'ny alika stylish
1.3 Satroka fahavaratra misy visor
1.4 Paosin'orana tsy tantera-drano
1.5 Crochet ririnina satroka
1.6 Mafana ny sofina sy ny tendany
1.7 Satroka Cowboy ho an'ny alika mafy indrindra
2 Inona no atao hoe satroka alika?
3 Ahoana ny fisafidianana ny satroka tsara indrindra ho an'ny alikanao
4 Torohevitra mba zatra amin'ny alikanao
5 Aiza no hividianana satroka alika
Ny satroka tsara indrindra ho an'ny alika
Satroka visor ho an'ny alikanao sy ho anao
Pawaboo 2 Piece de...
Manana an'izany rehetra izany ity satroka be tampony ity, eny fa na dia kopia lehibe hifanaraka amin'ny alikanao aza! Ho fanampin'ny hita amin'ny mainty sy manga, ny satroka dia manana habe maromaro mba hampifanaraka ny tsara indrindra amin'ny lohan'ny alikanao, mba hanapahan-kevitra hoe iza no mety aminy dia tsy maintsy mandrefy ny halaviran'ny sofina ianao. sofina misy kasety fandrefesana. Ny satroka dia misy lavaka roa hametrahana ny sofina ary mahazo aina sy mora apetraka ary amboarina amin'ny fehin-kibo velcro ao ambadika sy tady misy fikatonana plastika eo amin'ny saokany.
Amin'ny lafiny iray, ny mpampiasa sasany dia manondro izany Somary tery ny habeny ho an'ny alika lehibe kokoa.
Satroka fitsingerenan'ny andro nahaterahana ho an'ny alika stylish
Satroka tsingerintaona ho an'ny...
Raha tia ny alikanao mihoatra noho ny zava-drehetra eto amin'izao tontolo izao ianao, dia tsy afaka mijanona hankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany amin'ny fomba rehetra mendrika azy, izany no mahatonga ity satroka tsara tarehy miendrika mofomamy ity. Tafiditra ao anatin’izany ihany koa ny bandana mameno ny tarika. Ny lamba dia tena malefaka ary afatotra amin'ny tady misy fikatonana plastika mifanaraka amin'ny saokany. Misy loko roa izy io, manga sy mavokely. Amin'ny lafiny ratsy, toa ny habeny dia ara-drariny ary sarotra ny mitafy, na dia tsy mety ho mahafatifaty aza ny vokatra.
Satroka fahavaratra misy visor
Una satroka fahavaratra mampahazo aina amin`ny lamba tena mangatsiatsiaka ary misy amin`ny loko telo (manga denim, mavokely ary mainty), habe isan-karazany (manomboka S ka hatramin'ny L) ary plastika mahazatra sy fanakatonana kofehy. Misy lavaka roa amin'ny sofina koa izy io mba hifanaraka tsara kokoa. Ity modely ity dia miavaka indrindra amin'ny lambany, izay araka ny voalazanay dia tena vaovao, ary koa tena maivana, mifoka rivotra ary mitroka ny hamandoana, ka tonga lafatra amin'ny fahavaratra.
Paosin'orana tsy tantera-drano
Zellar tsy tantera-drano ho an'ny...
Amin'ny ankapobeny, ny satroka tantera-drano dia matetika ampiana amin'ny akanjo orana, satria, mba hiarovana ny alikantsika amin'ny orana, dia tsara kokoa ny manarona ny vatana manontolo. Amin'ity modely ity dia azonao atao ny mitafy azy mora foana (misy fanakatonana velcro), ankoatra izany, misy lavaka maromaro ho an'ny harness, ny tady ... ka ny biby dia ho tena mahazo aina sy tanteraka fialokalofana amin`ny orana. Ny antsipiriany toy ny atiny dia vita amin'ny harato mifoka rivotra, ny tady mitaratra ary ny paosy kely mampahazo aina hitehirizana loka na zavatra hafa dia mahatonga an'io modely io ho iray amin'ireo akanjo orana tsara indrindra ho an'ny biby fiompy.
Crochet ririnina satroka
DELIFUR Mampihomehy Cap ...
Mitandrema, satria rehefa hitanao ny alikanao mitafy an'io satroka crochet tsara tarehy io, miaraka amin'ny tambony sy ny zavatra rehetra, dia mety ho voan'ny fanafihana fitiavana ianao. Misy amin'ny habe sy loko isan-karazany (samy miaraka amin'ny tsiro Krismasy, na ho aingam-panahy avy amin'i Dadabe Noely na ny elves), dia modely mafana be. misy loaka ho an'ny tarehy ary iray hafa ho an'ny tenda. Ankoatra izany, dia tonga somary ambany, izay miasa toy ny scarf ihany koa. Ny hany fa tsy misy loaka amin'ny sofina.
Mafana ny sofina sy ny tendany
Chapel de Dog Hoodie...
Ny vokatra mahaliana mifandraika amin'ny satroka alika dia fanafana sofina sy hatoka tahaka ity. Miasa toy ny panty mahazatra entin'ny olombelona eny an-tendrombohitra izy ireo: miankina amin'ny fomba fitafy azy, afaka manarona ny tendany na ny sofina isika. Miaraka amin'ity farany, ankoatra izany, ny alika dia hahatsapa kely kokoa, noho izany dia azo ampiasaina amin'ny toe-javatra mahasosotra ny biby, toy ny tafio-drivotra, fety ... tsy isalasalana fa vokatra tena mahaliana izay ahafahantsika miaro ny mpitarika ihany koa amin'ny ririnina.
Satroka Cowboy ho an'ny alika mafy indrindra
Satroka Cowboy ho an'ny...
Tsy te hifarana raha tsy manoro anao iray amin'ireo satroka alika kely indrindra (tsy miaro amin'ny hatsiaka na ny hafanana) fa tena mahafatifaty indrindra Ny zavatra hitanay: ity satroka cowboy ity, miaraka amin'ny molony midadasika sy ny tady, vita tanana ary misy lamba tsara tarehy. Ho toy ny nandao an'i Dallas ny biby fiompinao!
Inona no atao hoe satroka alika?
Satroka ho an'ny alika tsy vitan'ny hoe mitazona ny biby fiompinao amin'ny lamaody farany indrindra na ny mahafatifaty indrindra ao amin'ny valan-javaboaryManana asa maro ihany koa izy ireo, indrindra fa ny fiarovana amin'ny fisehoan-javatra momba ny toetr'andro.
voalohany, satroka maneho fiarovana lehibe amin`ny hatsiaka, indrindra raha vita amin'ny volon'ondry izy ireo. Tsarovy fa raha miaina amin'ny toetr'andro mafana na latsaka ianao dia tsy ilaina ny mametraka satroka eo aminy, na izany aza, amin'ny hafanana ambany dia ambany, na miaraka amin'ny fisian'ny ranomandry, ny satroka dia hanampy amin'ny fitazonana ny alikanao mafana. Araka ny voalazan'ny renibeny, mba tsy ho voan'ny sery dia tsy maintsy atao mafana ny tongotra sy ny loha!
Faharoa, satroka dia tena ilaina amin`ny toe-javatra ny hafanana, na dia amin'ity tranga ity aza dia tsara kokoa ny miantso azy ireo satroka, satria mba hahavitany tsara ny asany dia tsy maintsy manana visor izy ireo. Noho izany, tsy ny lohan'ny alika ihany no voaro amin'ny masoandro sy ny hafanana, fa ny maso koa, satria, toy ny amin'ny olombelona, ​​ny satroka dia misoroka ny taratra UVA.
Farany fa tsy latsa-danja amin'izay, satroka sy satroka tsy tantera-drano dia hevitra tsara rehefa entinao mivoaka ny alikanao amin'ny andro orana, satria noho ny elatra (indrindra raha mpanjono izy ireo) dia tsy hiditra amin'ny masonao ny rano, izay hahatonga anao hahatsapa ho mahazo aina kokoa.
Ahoana ny fisafidianana ny satroka tsara indrindra ho an'ny alikanao
Ny fisafidianana satroka dia mety ho sarotra (miala tsiny fa tsy azo toherina ny teny), izany no antony mety mahasoa ireo torohevitra ireo:
Fidio tsara ny habeny. Okay, fototra izany, saingy mora izany fa miaraka amin'ny fientanentanana amin'ny fividianana tiara vaovao ho an'i Cujo dia adinonao ny mandrefy ny lohany mba hifanaraka tsara ary tsy hianjera na hihenjana. Jereo miaraka amin'ny modely tsirairay, satria mety miovaova ny fandrefesana.
Eritrereto hoe inona no hampiasanao azy io. Tsy mila karazana satroka mitovy ianao raha avy ny orana, fa raha mangatsiaka toy ny masoandro be. Araka ny voalazanay etsy ambony, ho an`ny mangatsiaka tsy misy toy ny volon`ondry satroka na fitaovana hafa mafana; ho an'ny masoandro, satroka misy visor sy lamba mifoka rivotra, ary ho an'ny orana, satroka mpanjono na misy visor vita amin'ny lamba tsy tantera-drano.
Miloka amin'ny fampiononana ny alikanao. Noho izany, dia tsy soso-kevitra ny hijery akaiky ny habeny, fa koa amin`ny singa hafa, ohatra, raha ny lamba dia vita amin`ny zavatra mangidihidy na ny fanakatonana, izay mety ho fingotra tady izay mihidy eo ambanin`ny saokany. velcro, na kofehy misy fanakatonana plastika. Ny satroka misy loaka sofina dia tena aroso ihany koa, satria milamina sy mahazo aina kokoa.
Torohevitra mba zatra amin'ny alikanao
Ny alika sasany dia manaiky ny karazana kojakoja rehetra ary toa modely voajanahary izy ireo, na izany aza, ny hafa Sarotra ny manaiky singa hitany vahiny. Mba zatra azy ireo:
Hamarino tsara izany marina ny habeny ka ny satroka dia mahazo aina araka izay azo atao. Arakaraka ny maha-marin-toerana azy (tsy tery, mazava ho azy), no hahatanty tsara kokoa azy ireo.
Avelao ny fotoana voalohany, alohan'ny hanaovana azy, fofona ary diniho ho mahazatra.
Asio amin'ny sasany minitra vitsy isan'andro mba hizatra azy.
Raha tsy misy fomba farany, aza terena. Raha miahiahy momba ny masoandro ianao, dia afaka misafidy fitaovana hafa (toy ny solomaso ho an'ny alika) na solomaso masoandro ho an'ny biby fiompy. Azonao atao ihany koa ny manandrana misoroka ny ora mafana indrindra, mangatsiaka na mafy.
Aiza no hividianana satroka alika
Misy toerana maro samihafa ahafahanao mividy satroka alika, famenoana izay, noho ny endrika mora, dia manana modely maro samihafa, izay mahafatifaty kokoa. Ohatra:
En AmazonAraka ny hitanao teo amin'ny fifantenana ny vokatra izay narosonay etsy ambony, dia manana modely hampijanonana fiara telo, samy notapatapahina tsotra no sarotra kokoa sy be pitsiny. Ary koa, raha nanao fifanarahana tamin'ny safidy Prime ianao dia tsy manana izany ao an-trano.
En fivarotana manam-pahaizana manokana toy ny TiendaAnimal na Kiwoko dia manana satroka vitsivitsy ho an'ny alika ihany koa. Ny zavatra mahaliana momba ireo safidy ireo dia ny fananana fivarotana ara-batana, azonao atao ny mitsidika azy ireo mba hahitana raha mifanaraka amin'izay tadiavinao sy ny biby fiompinao ny habeny sy ny modely.
Farany, aza manilika safidy hafa tena mahafinaritra, ohatra, misy pejy web sy mombamomba maro amin'ny vavahadin-tserasera toy ny Etsy izay mivarotra satroka vita tanana. Tsy isalasalana fa iray amin'ireo safidy tsara indrindra izy ireo raha tianao ny satrobon'ny biby fiompinao ho tany am-boalohany sy miavaka.
Manantena izahay fa nanampy anao hahita, ao anatin'ity antontam-tsatroka alika ity, izay mety aminao sy ny biby fiompinao. Lazao anay, efa nanao satroka ve ianao? Manana modely tianao ve ianao? Nila zatra be ve izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Ny satroka alika tsara indrindra amin'ny ririnina sy ny fahavaratra
Cape ho an'ny alika, mafana kokoa tsy azo atao
Ny cones tsara indrindra ho an'ny alika sy ny hafa